Njem nlegharị anya Uganda ugbu a na-ezubere ndị isi ala na njem mkpali ime ụlọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Njem nlegharị anya Uganda ugbu a na-ezubere ndị isi ala na njem mkpali ime ụlọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Uganda CEOs nri ụtụtụ
Otu ndị njem nlegharị anya Uganda (UTA) na ngalaba nkeonwe Foundation Uganda (PSFU) haziri nri ụtụtụ na ihe ngosi nke ndị isi na Fraịde, Ọktoba 22, 2021, na Kampala Sheraton Hotel.
Emere mmemme a n'okpuru mmemme mgbake akụ na ụba na nkwụghachi azụ (CERRRP) COVID-19.
Nke a bụ iji kpalite njem mkpali na ngalaba ụlọ ọrụ na-eche ndị isi ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nkeonwe na ọha.
Onye odeakwụkwọ na-adịgide adịgide (PS) nke Ministry of Tourism Wildlife and Antiquities (MTWA) Doreen Katusiime meghere ihe omume ahụ.
Mgbe ọ na-agwa ndị isi ndị isi na ndị na-eme ihe ngosi na-abịa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'anụ ahụ, ọ kọrọ na ụlọ ọrụ nkeonwe nwetara mfu ọrụ, ụgwọ ọrụ, mfu nke ego na ụlọ ọrụ na n'ọkwa mba, na mfu nke mgbanwe mba ọzọ nke na-eyi egwu nchekwa. N'agbanyeghị nke a, ahịa ụlọ gosipụtara na ọ bụ arịlịka a pụrụ ịdabere na ya n'agbanyeghị nsogbu ndị a.
O kwuru na nleta ndị Uganda na-abawanye na saịtị njem nlegharị anya dị iche iche gụnyere ogige ntụrụndụ mba, Isi iyi nke Naịl, akụkụ osimiri, Uganda Anụ ọhịa Education and Conservation Center (UWEC), àgwàetiti, na n'otu vein ohere akụrụngwa emewo ka mma njem na itinye ego na ebe obibi na njem nlegharị anya na-eji nwayọọ nwayọọ na-eto eto. Ọ gbakwụnyere na a na-akwado ọchịchọ site n'ịbawanye ụba nke klaasị etiti, nbata nke ngalaba ụlọ ọrụ, na mgbanwe ICT nke mere ka ozi dịkwuo mfe ịnweta.
"Ọtụtụ ndị Uganda na-enweta ego nke aka ha na ụzọ ha ga-esi gbasaa profaịlụ mmefu ego ha. Uru ndị a dị mma na-egosipụta ohere a na-ejighị n'aka. Ọchịchọ njem nlegharị anya nke ụlọ bụ ndị enyi na ndị ikwu na-eleta; njem ime obodo; mmemme omenala; na mmemme gụnyere ọmụmụ, alụmdi na nwunye, emume mmalite, wdg. Ihe omume ndị a bụ emume na-ejikọta obodo anyị, na mmemme omenala ka e nweghachichara alaeze ọdịnala ewetakwara mmasị karị gụnyere ncheta ncheta ọchịchị na nleta nke ndị isi omenala na-eleta ndị ha na-achị, " PS kwuru.
Ọ kọwapụtara ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ nke njem nlegharị anya ụlọ gụnyere ihe omume dabere na okwukwe, nke kachasị ama bụ njem njem nke Namugongo Uganda nke Martyrs kwa afọ na June 3, nkpagbu Pentikọstal, ọgbakọ, ihe mkpali, nkuzi, na nzukọ nke ghọrọ ngwa ọrụ siri ike maka mkpokọta ọha na eze na akụ na ụba na ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ na-akpali akpali bụ njem maka ihe ahụike, ntụrụndụ, ịzụ ahịa, agụmakwụkwọ, na nyocha.
Ọ jara Master Card Foundation mma maka ọbịbịa na-akwado ngalaba njem nlegharị anya maka mgbake na nkwụsi ike ma rịọ ndị isi ụlọ ọrụ na-aga anụ ahụ na ịntanetị ka ha nabata njem na-akpali akpali.
Onye isi okwu na Private Sector Foundation Uganda (PSFU) na-arụ ọrụ onye isi oche, Director Francis Kisirinya, kwuru na ebumnobi e ji kpọkọta nri ụtụtụ bụ iji kwalite njem mkpali afọ n'etiti otu ụlọ ọrụ na ndị ọrụ Uganda. N'okwu ziri ezi ya, o kwuru na ọ bụ n'ihi na ọ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ha na-enweta ego a na-atụfu ego nwere ike itinye na njem mkpali.
O kwere nkwa na PSFU ga-agbasi mbọ ike iji hụ na ụlọ ọrụ nkeonwe nwere ebe azụmahịa dị mma site na nkwado, ime ihe, na nyocha maka uto ụlọ ọrụ na-adigide. O kwuru na ngalaba njem nlegharị anya na ile ọbịa bụ otu n'ime ngalaba nke ọrịa COVID-19 metụtara nke ukwuu. Agbanyeghị, ugbu a ngalaba ahụ na-ahụ ụzọ mgbake na-aga n'ihu site na usoro njide nke gọọmentị tinyegoro.
Dabere na akụkọ MTWA, oria ojoo COVID-19 gbara ndị Uganda na-enwebughị ike ịga leta ebe nkiri n'ime obodo ha. N'agbata Ọgọst 2020 na Machị 2021, njem nlegharị anya ụlọ ji okpukpu atọ site na ndị njem 21,000 ruo 62,000. N'ịga na ọnụ ọgụgụ ndị a, ọrụ a dị elu karịa site na March ruo December na-atụle ụlọ ọrụ na-abanye n'oge kachasị elu.
Ọ kọwara njem mkpali dị ka ụgwọ ọrụ ma ọ bụ mmemme iguzosi ike n'ihe nke na-ewere ụdị njem a na-akwụ ụgwọ niile na mmemme nke mmemme na ihe omume. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọha na eze na nkeonwe na-ejikọta njem na-akpali akpali nke na-achọpụta uru sitere na nkwụsi ike dị ukwuu site n'aka ndị ọrụ, mmekọrịta siri ike n'etiti ndị ọrụ na ndị ọrụ, mkpali na-adịgide adịgide, na-enye ihe mgbaru ọsọ, asọmpi ahụike n'ebe ọrụ, na-akwalite mmepụta nke ndị ọrụ na mmepụta ihe, ịmepụta a omenala ụlọ ọrụ dị mma, na-eme ka azụmahịa ahụ mara mma maka ndị na-ewe ọrụ.
Ọ gbakwụnyere na njem na-akpali akpali nwere nnukwu mgbanwe akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze nye ndị ọrụ na akụ na ụba nke nwere ike ịgụnye ịkwalite uto arụmọrụ siri ike na ịkwado, ịmepụta uto ahịa na-enweghị atụ, na ịlaghachi na ntinye ego. Site na ego nke onwe, ọ na-enye ahụmahụ pụrụ iche nke ndị ọgbọ na-eme njem na ndị isi ụlọ ọrụ dị irè karịa mgbe ha na-eme njem n'onwe ha. Ọ na-akwadokwa ike ịhazi ebumnobi ụlọ ọrụ, ebumnobi onye ọ bụla, na nkwado ika. Nnyocha na-apụta na-egosi na njikọ mmetụta uche na ika ahụ dị ike karịa ndị na-akpali akpali ndị dị ugbu a nanị na-eme mgbalị ịre ahịa.
Njem mkpali na-enwekwa mmetụta akụ na ụba dị ka njem na akụ na ụba na-alọghachi azụ bụ isi ihe na-akpali akpali maka ịmaliteghachi akụ na ụba ụwa dị ka nzukọ ihu na ihu na-akwado nkwado na mmekọrịta ọha na eze. Hotelslọ oriri na nkwari akụ dabara na ụlọ ọrụ njikwa ebe mpaghara na-enweta ezigbo nloghachi na itinye ego na ọrụ ozugbo maka ndị ntorobịa na-abịa. Ya mere, ọ gbara ndị isi oche nọ ugbu a na ndị ọrụ gọọmentị ume ka ha tinye usoro iwu ndị dịka ọmụmaatụ na-akpali ngalaba IT na nchịkwa nke a na-elegharakarị anya.
Ọ rịọrọ gọọmentị ka ha kwadoo n'ịzụlite na ịmepụta ụkpụrụ iwu maka ngwaahịa njem nlegharị anya sara mbara iji kwalite asọmpi na mpaghara nzukọ, mkpali, ogbako na ihe ngosi (MICE), njem nlegharị anya agro, njem nlegharị anya nke obodo, njem nlegharị anya omenala. njem nlegharị anya okpukpere chi, wdg.
Ekwesịrị itinye uche na ịkọwapụta ahụmịhe dị iche iche ka ha wee dịrị ndị Uganda wee mepụta akara mba siri ike wee mepụta nkọwa na-agbanwe agbanwe nke akụkọ Uganda n'ofe ngwaahịa njem nlegharị anya na itinye ego na nyocha ahịa.
O kelere onye mmebe mmepe na onye nkwado, Master Card Foundation, maka iwepụta mmefu ego ijeri UGX32 (US$ 8.98) nke o nyefere n'aka gọọmentị na ụlọ ọrụ nkeonwe. Ụlọ ọrụ ahụike a nwere ngwa ule 40,000 PCR, akụrụngwa maka ụlọ nyocha na Uganda National Bureau of Standards (UNBS) maka asambodo ngwaahịa, akwa ụlọ ọgwụ, ihe nchebe onwe onye (PPEs), na akụrụngwa nchekwa.
O kwubiri site n'ịkpọsa na PSFU na gọọmentị na-arụkọ ọrụ iji mepụta atụmatụ mmepe ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ga-esi na COVID-19 pụta, na ngwugwu ahụ gụnyekwara atụmatụ iji gbakee ma wulite nkwụsi ike na otu n'ime ihe si na ya pụta bụ nzukọ nri ụtụtụ a. .
N'ịkwado ihe ngosi Kisirinya, Peter Mwanje, RT nke Uganda Chapter, ụlọ ọrụ na-akpali akpali nke onwe, kwuru na-agbakwụnye na mmemme mkpali nwere ike ịgụnye ọrụ mmekọrịta ọha na eze, dịka ọmụmaatụ ịse ngọngọ ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ nanị ịga n'ụlọ ezumike, ma ọ bụ n'akụkụ osimiri, ma ọ bụ adrenaline. ihe omume. Ọ dụrụ ndị na-ahụ maka njegharị ọdụ ka ha mepụta tebụl dị iche iche maka njem mkpali, n'ihi na ọ dị iche na nnọkọ.
Ọ gwakwara ndị isi ụlọ ọrụ ahụ na mmemme mkpali agaghị emetụta mmefu ego ha n'ụzọ ọ bụla n'ihi na ha ga-eji naanị pasentị nke ego enwetara site na oke uru. Ọ bụ 7% nke ọrụ njem nlegharị anya azụmahịa niile na-aza ihe ruru ijeri US $ 75 n'ụwa niile.
Pearl Horreau, Onye isi oche nke UTA, onye na-ahụ maka njem nlegharị anya, njem na ngalaba ile ọbịa, rịọrọ ndị isi ụlọ ọrụ ka ha were njem nlegharị anya n'ụlọ dị ka ike ọzọ maka ịkpali ndị ọrụ ha site n'inye ha ụgwọ ọrụ n'agbanyeghị ezumike akwụ ụgwọ iji wusie mmekọrịta ụlọ ọrụ ike. iji meziwanye arụpụtaghị ihe n'ebe ọrụ.
Ihe ngosi ndị a sochiri nnọkọ nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ ama ama nke Kọmishọna na-ahụ maka njem nlegharị anya maka MTWA, Viviane Lyazi duziri. Ọ gụnyere Uganda Tourism Board (UTB) Deputy CEO Bradford Ochieng na Onye isi oche nke Association of Ndị ọrụ njem nlegharị anya Uganda (AUTO) na onye otu PSFU, Civy Tumusiime Ochieng, onye kwuru na Uganda bụ mba nke anọ dị iche iche n'ụwa n'ihe gbasara omenala. O kwuru na nyocha BBC mere n'afọ 2019 gbasara ndị mbịarambịa chọpụtara na Uganda bụ obodo kacha nwee enyi n'ụwa. Agbanyeghị, ọmụmụ ntụzịaka ikpeazụ nke asọmpi gosiri Uganda na mba 112 n'ime mba 140. N'ihe gbasara ahụike na ịdị ọcha, ọ bụ 136 n'ime 140 bụ nnukwu nsogbu. Ọ dụrụ ọdụ na ha kwesịrị ime ka ebe a na-aga mbụ mara mma na asọmpi. Civy Tumusiime gbara ndị isi ụlọ ọrụ ume ịbanye n'ụgbọala mmemme njem nlegharị anya nke ụlọ site n'ịgba ndị ọrụ ha na ezinụlọ ha ume njem ụlọ, dịka ndị na-eto eto ga-etolite nabata omenala.
Ụlọ ọrụ ngosi sitere na ụlọ ọrụ nkeonwe gụnyere National Arts and Cultural Crafts Association of Uganda, Murat Studios, Arlanda Tours and Travel, Orogu Tours, Petnah Africa Tours, Voyager African Safaris, Lets Go Travel, FCM Travel Solutions, Pristine Tours, Buffalo Safari Lodge, Papyrus Guest House, Park View Safari Lodge, Saịtị Njem, Gazelle Safaris, Gorilla Heights Lodge, Pinnacle Africa, MJ Safaris, Asante Mama, Go Africa Safaris, Maleng Travel, Talent Africa, na Toro Alaeze.
Marsh ekwu, sị:
November 12, 2021 na 06: 33
Ọ dị mma ịhụ Uganda na-elekwasị anya n'ahịa ụlọ. Ndị njem nlegharị anya mba ụwa chọrọ visa ịga leta na usoro e-visa ka nwere nsogbu. A ga-edozirịrị nke a ASAP.